Abesifazane abaningi bathanda uzizamele ukubukeka kwakhe futhi imibala izinwele njalo. Kodwa njengoba wazi, upende ubufakazi ngokusebezisa njalo bonakalise izinwele, ngibenze mncane, ziyaqothuka futhi ibuthakathaka. Wenzani, musa ufuna ukuba njalo uzilungise nobungqabavu? .. Uma uqala wafohla kwempunga lokuqala, futhi ngokuqinisekile kungaba khona ngenxa yokwethuka! It kuvela ukuthi indlela yokuphuma yalesi simo, kukhona, ngomqondo ongokomfanekiso, "kusho osemqoka": Ungakwazi ukudaya izinwele zakho bese kungalimazi impilo yabo. Omunye amathuluzi kuyokusiza ukuba njalo uzilungise futhi amahle - a imoto Umbala "Tonic". Kulesi sihloko ngizokhuluma ngalokho kukuhle, njengoba lisetshenziswe ngendlela efanele nokuthi ingabe ikhona yini izinyathelo ezengeziwe kudingeka imikhiqizo izinwele ukunakekelwa emva ukusetshenziswa.
Eziningana "UKUZE" esivuna toning imoto
Kungani I batusa it umbala amashampu esikhundleni upende ukumelana izinwele Umbala? Okokuqala, imoto is ngokushesha wageza off. Yiqiniso, lokhu kungase kwenziwe isibaluli bokwenza izindlela. Nokho, uma wehluleka yokudaya izinwele, ngeke uzisole isikhathi eside. Eziningana izinqubo ukugeza - futhi izinwele zakho uzothola umbala yayo yasekuqaleni. Okwesibili, staining kwenzeka ngaphandle ukulinyazwa curls yakho. Ungesabi ukuthi ngeke ashise izinwele, abenze ziyaqothuka futhi ezingaphili.
Futhi ekugcineni, okwesithathu, Umbala amashampu upende kakhulu phezu kwempunga, ngivuselele umbala engokwemvelo izinwele, okwenza kube okukhanya te ngaphezulu. Iqiniso ukuthi izinwele kuyodingeka uthinte ngokuvamile kakhulu, ngisho noma ungenawo ayeke.
Kungani toning imoto "Tonic"? Ngenxa nomkhiqizi leli thuluzi linikeza ezihlukahlukene elikhanyayo, imibala okuyenga, phakathi kwayo yonke fashionista isiqiniseko ukuthola kukho efanelekayo. Inqubo ngokwaso ilula kakhulu futhi ezimnandi, akukho nephunga angafi ammonia. Umbala imoto "Tonic" has a iphunga ecashile ezimnandi. Naye izinwele umbala - uyintokozo. Izame futhi uzibonele!
Futhi manje sekuyisikhathi sokukhuluma mayelana nendlela yokusebenzisa kahle a imoto toning "Tonic". Ngakho, landela lezi ziqondiso:
Beka izandla zakho phezu amagilavu plastic ukuvikela isikhumba sakho nezinzipho kusukela staining ngephutha.
Vikela izingubo izimpawulo.
Sebenzisa ukhilimu amafutha kancane eduze hairline.
Ukuvikela okugeza usigcwalisa ngamanzi 1/3. Uma imoto spray isawela ubuso bayo, ngokushesha bayiqede nge isiponji ciki "mhlophe" noma "Domestos".
Faka Umbala imoto ukuhlanza, kancane izinwele manzi ngesikhathi hairline. Qala yokudweba kusukela ngemuva ekhanda.
Ekupheleni isicelo sokuqanjwa nekama le izinwele kwaphela ikamu futhi zacheshite ngibabone.
Kusho efukamela imizuzu 5-30 kuye ngokuthi ukushuba oyifunayo ukudaya.
Hashaza amanzi amaningi Ukwakheka ngaphandle kokusebenzisa imoto.
Faka isicelo wageza izinwele namafutha-hashaza futhi kugeze futhi.
Umbala imoto "Tonic", okuyinto libuyekeza kahle eliphezulu izindlela ukudaya kahle izinwele zakho, abenze uthambile ngokweqile, nokunwebeka futhi shiny.
Savele sabona ukuthi akufanele bakuqonde ngokushesha ngesikhathi upende ukumelana ukushintsha umfanekiso waso. Okokuqala, ungazama ukusebenzisa kahle izinwele wemvelo, ezifana umbala imoto "Tonic". Palette shades ke wehlukile kakhulu. Phakathi kwabo, fashionista uzokwazi bazikhethele emthunzini kuphela eyenza kungafani.
Alexei Mikhailovich Romanov: isithombe zomlando. Biography, izinqubomgomo kabusha futhi imiphumela wokubusa Alekseya Romanova
Salvatore Giuliano - umlando umphindiseli zabantu
Izingane Recumbent - umjaho yangempela for kids!